Raw Orlistat powder (96829-58-2) Vatengesi - Phcoker Chemical
SKU: 96829-58-2 Category: Kuonda
Ropa raWorlistat rinenge riri mukirasi yemishonga inonzi lipase inhibitors inoshanda nekudzivirira kubatwa kwe25% yemafuta muchikafu uye inoshandiswa kurerutsa kuwanda kwevanhu vakuru, kunyanya kushandiswa-nekoriori uye zvokudya zvakaderera-mafuta. Raw Oroldat powder is drug in order to treat fatness. Basa rayo guru nderokudzivirira kunwa kwemafuta kubva pakudya kwevanhu, nokudaro kuderedza caloric kudya. Raw Oroldat powder inoshanda nekudzivisa pancreatic lipase, enzyme inoputsa triglycerides mumukumbo. Pasina iyi enzyme, triglycerides kubva pakudya kunodziviswa kuti isasvibiswa kuti ive yakawanda isina mafuta yakawanda acid uye yakanyanyiswa isina kupfuura. Purojekiti Yakawanda yeOrlistat powder inoshandiswa muhuwandu hwevanhu vanokwanisa kuve nehuwandu hwehutano hwehuropa, chirwere cheshuga, high cholesterol, kana chirwere chemwoyo. Kubudirira kweRaw Orlistat powder mukusimudzira kurasikirwa kwemazivi kunotsanangura asi kuzvininipisa. Zvinyorwa zvinyorwa kubva kumakiriniki ekuedza zvinoratidza kuti vanhu vakapa mafuta eWorldat Rawd kuwedzera kune mararamiro ehupenyu, zvakadai sekudya uye kuita zvekuvhima, vanorasikirwa ne 18-2 kilograms (3-4.4 lb) kupfuura avo vasingatori mishonga pamusoro pegore. Raw Oroldat powder uyewo zvishoma nezvishoma inoderedza kushanda kweropa uye inoita seyakadzivirira kutanga kwechirongwa che 6.6 chirwere cheshuga, zvichibva pakurema kwega pachako kana zvimwe zviitiko. Iyo inoderedza kusangana kwechirwere cheshuga chechipiri II kune vanhu vanorema zvakapoteredza mutengo wakafanana wekuchinja mararamiro anoita.
Orlistat powder isiri ye lipase inhibiting kuora muviri kurasikirwa uye inobudisa hydrated yepostpost. Kunyora zvakanaka uye kusarura kunokonzera mudumbu lipase uye pancreatic lipase, zvisingabatsiri kune mamwe maitiro ezvokudya (zvakadai samamylase, trypsin uye chymotrypsin) uye phospholipase, uye haibatsiri kutora kwehydrohydrates, protein uye phospholipid. Ichi chemishonga hachina kunyanya kunyangwe chikafu chepamuviri uye chinokanganisa kuchinjwa pamapase. Orlistat inogadzirisa mapurogiramu ne covalent kusunga kune serine rekugara panzvimbo dzinobudirira dzepamu uye pancreatic lipase. Izvi zvinodzivisa mafuta muzvokudya kubva pakuputsika muhurukuro yemafuta asiria uye diacylglycerol, saka haigone kuvharwa, kuderedza caloric kudya uye nokudaro kudzora uremu hwemuviri. Izvi zvinodhaka hazvidi kuti zvigadziriswe nemuviri wose kuti uite. Orlistat's pharmacological work is a dependent dose: chirwere chorapa yeOrlistat (120mg / d, tid, yakatorwa nechingwa), pamwe chete neka-calorie yezvokudya, inogona kuderedza kusvika ku30% yemafuta. Mune chienzanidzo kuenzanisa vanhu vakajairika uye vakazvipira zvakanyanya, Orlistat yakanga isina kunyanya kushandiswa nemuviri zvachose uye yaiva nehana yakanyanya kuisa pfungwa. Mushure mekunge imwe yemuromo inonzi (iyo yakakura zvikuru iri 800mg), kuisa ropa kweOrlistat mumaawa anotevera 8 kwaiva <5 ng / ml. Kazhinji, chirwere chekurapa chaOrlistat chinongowanikwa mumuviri uye hachizogadziriswi munguva pfupi yekurapa. Mune in vitro inoshandiswa, Orlistat yakasungwa nemamwe mapuroteni e-serum akapfuura 99% (yakagadzirirwa mapuroteni aiva kunyanya lipoproteins uye albumin), uye kuvhara kwayo kwemasero matsvuku eropa kwakanga kwakanyanya.
▪ Orlistat inoderedza muviri mashoma kupfuura 20% pamutengo wemafuta emuviri
▪ Orlista inokubatsira kuti udzidze kuverenga makori
▪ Orlista inokupa manzwiro ekugara zvakanaka
▪ Orlista ine migumisiro yakanaka inopa kuvimba uye mufaro kuvashandisi
▪ Orlista inopa migumisiro yakareba kwenguva refu
▪ Orlista inoderedza kuipa kwezvirwere zvakadai se hypotension, chirwere cheshuga, atherosclerosis uye
Nemhaka yekuti Orlistat poda yakaratidzwa kuderedza kunwa kwevhithamini yakawanda-yakasvibiswa uye betacarotene, vanhu vanofanira kurayirwa kutora mavhititamini ane vitamine ane mafuta akawanda kuitira kuti vagone kudya zvakakwana. Kunze kweiyo, mavitamini ekuwedzera anofanira kutorwa maawa mashoma 2 mushure mekunge kana mushure mekutonga kweOrlyatat powder, sekurara.